Rugby – «Mondial 2019»: tsara fanombohana ny Japoney | NewsMada
Rugby – «Mondial 2019»: tsara fanombohana ny Japoney
Par Taratra sur 21/09/2019
Na tsy nahoraka loatra toy ny an’ny baolina kitra aza, nanomboka tamin’ny fomba, ofisialy omaly any Japon, ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja baolina lavalava, sokajy lehilahy. Tsara fanombohana ry zareo mpampiantrano satria nanamontsana avy hatrany ny Rosianina, tamin’ny isa mazava, 30 no ho 10, ho an’ny vondrona A. Tsy niady mihitsy ny fihaonana fa nanjakan-dry zareo Nippon tanteraka ny 80 mn nilalaovana. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Ajinomoto Stadium.
Ny fizaram-potoana voalohany no afaka nanohitra ry zareo Rosianina satria nisaraka tamin’ny isa tery, 12 no ho 10, ny roa tonta. Nanokatra ny isa voalohany anefa ny Rosianina, tamin’ny alalan’ny baolina nentin-tanana, vitan’i Golonitsky, teo amin’ny minitra fahadimy, voatsara ka nahalasa ny isa ho 7. Nifoha tamin’ny torimasony ny Japoney ka nahatsindry baolina ihany koa teo amin’ny minitra faha-11, saingy tsy voatsara izany ka isa dimy ihany ny azony. Tsy nijanona teo fa mbola nahatonga “essai” indray ny Japoney ka isa 12 no ho 7 ny nentina niala sasatra.
Nitohy hatrany izany, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, ka efa nitarika tamin’ny isa 20 ny Japoney vao nahafaty “hors jeu” iray ny Rosianina. Tsy nijanona intsony izany raha tsy tany amin’ny isa 30, ho an’i Japon. Hitohy anio ny fifanintsanana ka i Aosatralia, hidona amin’i Fidji, ary i Frantsa, hifampitana amin’i Arzantina. Ny All Blacks, hikatroka amin’ny Springboks.